Madaxweynaha oo baaq ku aadan doorashada 2016 u diray shacabka Soomaaliyeed. – Radio Daljir
Madaxweynaha oo baaq ku aadan doorashada 2016 u diray shacabka Soomaaliyeed.
Agoosto 18, 2016 6:59 b 0
Muqdisho, 17 August 2016 (Villa Somalia)—-– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa baaq ku aaddan doorashooyinka 2016-ka dhacaya u diray qeybaha kala duwan ee bulshada iyo beesha caalamka.
DHEGEYSO-Mas’uuliyiinta hogaaminaya howlgalada Garoowe kasocda oo hadlay.
DHEGEYSO-Hogaamiyaha Khaatumo oo kahadlayo arrimo badan.